IValve eneMoto, iValve ye-Pneumatic Actuator kunye noMenzi weValve ye-Solenoid
Ubushushu obuphezulu Ivalve yeSolenoid
I-Valve yokunciphisa uxinzelelo
Ingcali yeValve eZisebenzelayo
Ukubonelela ngesisombululo sevalvu yokumisa enye ukuze ugcwalise iimfuno zakho zevalvu
I-COVNA yoMbane we-Actuator yeValve Series
Isisombululo sevalve esine-automated-stop ukuzalisekisa iimfuno zakho zevalvu.
Isisombululo sevalve esine-automated-stop ukuzalisekisa iimfuno zakho zevalvu
I-COVNA EBONAKALISWE IIVAVAVU
Ukunikezela ngazo zonke iindidi zeevalufa zeActuator kukhetho lwakho
Iivalvu zeActuator yoMbane
Iivalvu ze-COVNA zombane ze-actuator ezikhoyo kwibhola/ibhabhathane/isango/iintlobo zevalve yeglowubhu ukuhlangabezana neemfuno zakho zevalve
Iivalvu ze-Pneumatic Actuator
Iivalvu ze-COVNA ze-pneumatic actuator ziyafumaneka ekubuyeni kwentwasahlobo kunye nohlobo olusebenza kabini lwe-actuator kwiimfuno zakho zokuqhuba.
I-COVNA automated actuator ekhoyo kwi actuator yombane kunye nee actuators zomoya kwiimfuno zakho zokusebenza
Kutheni ukhetha iivalve zeCOVNA?
Ukuba nguMvelisi oKhokelayo weValve yeActuator
Gqibezela uthotho lweeMveliso
Inkonzo yokuLungisa iValve
Izisombululo ezenziwe ngomnxibelelanisi
Inkxaso yobuGcisa kunye neNkxaso
Njengomnye wabenzi beevalvu eziphambili e-China, i-COVNA igxininisa kwi-R & D, ukuyila kunye nokuveliswa kweevalvu ukususela ngo-2000, kunye nokwandisa uluhlu lwayo lwemveliso ukuhlangabezana neemfuno zamashishini ahlukeneyo kunye nokunceda ishishini ukuxazulula izisombululo zolawulo lwenkqubo.
Ukongeza, sikwabonelela ngoluhlu olubanzi lwee-valve actuator uthotho ukuhlangabezana neemfuno zakho zokusebenza. Ii-actuator ezahlukeneyo zikunceda ukuba uqonde ulawulo olukude kunye nokuphucula ukuthembeka kobunjineli.
Siyazi ukuba ngamanye amaxesha iivalvu eziqhelekileyo zisenokungalungeli usetyenziso olukhethekileyo. Ke ngoko, sibonelela ngeenkonzo zokwenza ivalve kwisicelo sakho ukuqinisekisa ukuba ivalveinokunikela izisombululo ezibalaseleyo zokulawula ulwelo kwiprojekthi yakho.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava evalve iye yasinceda ukuba siqonde nzulu iimfuno zamashishini ahlukeneyo. Siya kujoliswa kwishishini kwaye sikubonelele ngezisombululo zolwelo ezenziwe ngokufanelekileyo. Injongo yethu kukunceda iprojekthi yakho iphucule ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye nokwandisa izicwangciso zenzuzo.
Siyazi kakuhle ukuba iingxaki ezininzi ziya kudibana kwinkqubo yokuthengwa kwempahla, njengeendlela zokuhlawula, ukuhanjiswa, uthethathethwano njalo njalo. I-COVNA ineminyaka engaphezu kwama-20 yamava kurhwebo lwehlabathi. Ukongeza ekuncedeni abathengi ukuba bakhethe iivalve ezifanelekileyo kunye ne-actuator, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukubonelela abathengi ngenkqubo yokugcina ixesha kunye neendleko zokuhambisa imveliso.
Kwangaxeshanye, i-COVNA ineendawo zokugcina iimpahla ezi-2, ezinokusabela ngokukhawuleza kwiimfuno zevalvu yakho kunye nokubonelela ngeenkonzo zokuhanjiswa ngokukhawuleza.
I-COVNA ineziseko zemveliso ezi-3 kunye neendawo zokugcina iimpahla ezi-2. Sizama ukubonelela abathengi ngeenkonzo zokuhanjiswa ngokukhawuleza. Kwangaxeshanye, iqela lethu lokuthengisa lobuchwepheshaiya kunceda umisela ishedyuli yokuthenga ukuze uqinisekise ukuba iprojekthi yakho ayilibaziseka.
Sizimisele ukukunika inkonzo ebalaseleyo. Ukuze sikuncede uqonde ngakumbi iimpawu zevalve kunye nokusebenzisa kakuhle i-valve, siya kukubonelela ngenkxaso yobugcisa be-intanethi kunye nenkxaso yoxwebhu lwamahhala. Ndiyathemba ukunceda iprojekthi yakho iqhube kakuhle.
Izatifikethi zezona ndlela zokuqinisekisa umgangatho wemveliso. Sine-ISO9001: 2015, CE, SGS, TUV, FDA kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwama-30. Inkqubo yokuveliswa kwemveliso nganye iya kulandela ngokungqongqo imigangatho yamazwe ngamazwe.
Izatifikethi kunye neePatent
Zonwabele iiNkonzo zethu kwaye uncede iBusiness Rocket yakho
KuMsebenzisi wokuphela kunye noKontraka
Isiqinisekiso soMgangatho weMveliso
Imigangatho yemveliso yamazwe ngamazwe kunye novavanyo luqinisekisa ukusebenza kwemveliso
Inkxaso yobugcisa ukunceda ukusombulula isisombululo
Izisombululo zeSiko lolwelo Kuwe
Siza kugxila kwiimfuno zakho kwaye sikubonelele ngezisombululo ezenziwe ngokufanelekileyo
Ukwabelana ngolwazi lweMarike
Ukwabelana nawe ngolwazi lwentengiso ukukunceda ukwandisa isikali seshishini lakho
UQeqesho loLwazi lweMveliso kunye nokuPhendula ngokukhawuleza emva kweNkonzo yokuthengisa
Uqeqesho lwemveliso lukunceda ukuba ufumane intembeko yabathengi. Kwaye siya kuphendula ngokukhawuleza ukukunceda ekusombululeni ingxaki yokuthengisa emva kokuthengisa
UkuPhuculwa kweSicwangciso seNzuzo kunye neNkxaso yeZakhono
Amaxabiso akhuphisanayo ukuze akuncede ufumane inzuzo enkulu. Umthamo wemveliso ephezulu ukukunceda uqinisekise uluhlu lwempahla kunye nokwenza ishishini lakho lizinze
Yenza iivalufa zakho ziLungiselelwe ngaphandle koMyalelo umncinci.